UMFANYANA owakhetha ukuyosokwa emtholampilo, usechama afihle njengoba anokala umphambili ngesikhathi esokwa Isithombe: African News Agency (ANA)
NONTUTHUKO NGUBANE | June 30, 2020
USECHAMA ngokufihla umfana oneminyaka engu-12 owasokwa emtholampilo walimala njengoba umchamo usuphuma ezindaweni ezimbili.
Elandisa Isolezwe uthe indodana yakhe yafika nencwadi eyayivela esikoleni eyayithi bazosokwa.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal uMnuz Ntokozo Maphisa uthe: “UMnyango uyalibonga Isolezwe ngokulazisa ngalolu daba. Sikhathazekile ngalo mbiko. Ngeshwa, asikwazi ukuphawula ngoba sisazoqoqa imininingwane esikhungweni esithintekayo ukuze siluqonde ngokugcwele udaba. Sizozama ukuthola indlela yokusiza isiguli ngaphandle kokusilindisa ngokungenasidingo.”